Atọ atọ - PetrPikora.com
Atọ osisi fir
Pine (Pinus) bụ mkpụrụ ndụ nke osisi osisi, osisi, ma ọ bụ osisi, nke ezinụlọ Pinaceae. Na ụdị 110 nwere ike ịsị na ọ bụ ụdị kachasị nke ezinụlọ. Dị ka ndị nnọchianya ndị ọzọ nke ezinụlọ pines, ha na-emekarị na ugwu ugwu (ma e wezụga maka Pinus merkusii, nke na-aga n'ebe ugwu dị na Sumatra). Mpaghara nke nkesa a na-ahụkarị bụ nnukwu ma na-etolite site na mpaghara oke ọhịa Nordic site na eriri elu na subtropics na ugwu ugwu. Ma eleghị anya, ọ bụ site na Old World, ma ọ na-eru n'ọtụtụ anụ ọhịa dị na North na Central America; mpaghara ọzọ dị ọgaranya bụ East Asia, Indochina na Himalayas. Enwere umu umu mmadu 12-13 di na Europe, tinyere 9-10 abụọ na abanye na 3 ise ogwu. Ha niile bụ ndị na-acha uhie uhie, ndị na-eto eto na-asọmpi na-achọsi ike na mma ala, nke nwere ike iguzogide ụdị ebe ọ bụla; ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ọsụ ụzọ. Ufodu Ugwu North America na ndi di na Mediterranean di mma nke oma maka oku oku, dika ihe omumu ndi ozo gosiri. N'ime osisi ndị ahụ bụ anụ ọhịa kacha elu kacha dịrị ndụ n'elu Earthrend, ụfọdụ ihe atụ nke pine (Pinus longaeva) dị ogologo adịlarị karịa afọ 4 800.
A na-ekeji ọdịdị nke ụtụ ahụ na abụọ nkwụnye ego Pinus ma ọ bụ "pine siri ike", ya na 2-3, 5 ma ọ bụ ruo XINUM nke dị mkpa na ọkpụkpọ anụ ahụ, ọkpụkpụ abụọ dị iche iche, a na-ekesa kesaa na ọkpụkpụ azụ na cones na " otu nwa "(umbo), na Strobus ma ọ bụ" soft "pines, na-eji 8 ma ọ bụ 3 agịga na ùkwù nwere sheath, nke nwere vascle bundle, na-agbanyekarị n'ime agịga na navel (umbo) dị na njedebe nke akpịrịkpa seminal. Akpalitere nke ọma na oge Cretaceous dị ala.
Paini bụ otu n'ime osisi ndị dị oké ọnụ ahịa dị oké ọnụ ahịa. Karịsịa, ha na-enye akwa dị mma, dị nro na ọkara-siri ike, dị mfe ịrụ ọrụ, nke nwere ike iji wuo ụlọ na ngwá ụlọ. A na-ejikwa ya bụ resin nwere ọtụtụ ihe ndị dị na aromatic terpenic, na aromatherapy na ihe ịchọ mma, yana ọgwụ ogwu maka rheumatism ma ọ bụ arthritis; ọ bụkwa ihe na-eme ka a na-emepụta ihe. Mkpa na ogbu mmiri nwere ọtụtụ vitamin ma nọrọ ma ọ bụ ka na-ejikwa ha emepụta ihe oriri na mpaghara dị iche iche nke ụwa, yana mkpụrụ osisi oriri nke ụdị ụfọdụ a maara dịka fir ma ọ bụ osisi cedar. Osisi pine na ogige ugbo di ezigbo mkpa dika osisi ohia na osisi, ha na-ewu ewu dika osisi Krismas. Ọtụtụ ụdị fir dị iche iche na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọdịbendị, akụkọ ifo na ndụ ime mmụọ nke ụmụ mmadụ, nakwa dị ka ọtụtụ akwụkwọ na akwụkwọ nkà na ọhụụ.
firacha anụnụ anụnụmraky